Shiinaha Tungsten Carbide Digtoor Digirta Warshadaha Soosaarka Goobta Saliida iyo Warshad | N&D Carbide
Digirta loo yaqaan 'Tungsten Carbide Beck' oo loogu talagalay Warshadaha Goobta Saliidda
Digirta loo yaqaan 'choke bean' waxaa badanaa loo isticmaalaa waalka saxda ee xakamaynta qulqulka, digirta beekhu waxay lamid tahay nooca Cameron H2 big john choke bean, jirka Waxyaabaha: 410SS, oo ay kujiraan Tungsten Carbide (C10 ama C25) ama dhoobada, si looga ilaaliyo inay wax wasakheeyaan iyo xirashada duugga ah.
Digirta loo yaqaan 'Tungsten carbide choke' ayaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo dareerayaasha qulqulka waxaana badanaa lagu dhajiyaa ama u dhow yahay ceelka madaxa, digirkan digiriga ah waxaa riixaya mashiinka CIP si loo ilaaliyo tayada. Waxay leedahay iska caabin xirasho wanaagsan inta lagu jiro isticmaalka.
N&D carbide oo ah shirkad caalami ah oo loo yaqaan 'Choke Valve Bean', waa inay ka dhigtaa tikniyoolajiyadeeda muhiimka ah inay heli karaan macaamiisheeda ugu dambeysa qiimo jaban, iyadoo la iswaafajinayo tayo sare. Maadaama aan nahay hogaamiye warshad Choke Valve Bean, waxaan soosaari karnaa heerka ugu hooseeya ee 'Choke Valve Bean' qiime macquul ah. Diiradeena ugu weyn ayaa ah inaan gaarsiino alaab ka sarreysa rajada macaamiisheena qaab qiimo-ku-ool ah. Haddii aad u baahan tahay caawimaad kasta oo ku saabsan xulashada saxda Choke Valve Bean si aad u waafaqdo shuruudahaaga, waxaannu ku faraxsanahay inaan soo qaadno oo ku habboon shuruudahaaga.
Hore: Tungsten Carbide saxanka tubada
Xiga: Tungsten Carbide Madax Qaybaha Dayactirka